DEG-DEG: Donny van de Beek Oo Heshiis U Saxeexay Koox Premier League Ah, Soona Afjaray Waqtigii Adkaa Ee Manchester United - GOOL24.NET
DEG-DEG: Donny van de Beek Oo Heshiis U Saxeexay Koox Premier League Ah, Soona Afjaray Waqtigii Adkaa Ee Manchester United
Xiddiga khadka dhexe ee reer Netherlands ee Donny van de Beek ayaa ugu dambayntii soo afjaray waqtigii adkaa ee ku qabsaday Old Trafford, waxaanu hadda saxeexay heshiis uu kaga tegayo Manchester United oo saacadaha soo socda si rasmi ah loo shaacin doono.
Donny van de Beek oo 17 bilood ka hor ay Manchester United ka soo iibsatay kooxda horyaalka Eredivisie ee Ajax ayaa ka dalbaday tababare Ralf Rangnick in loo ogolaado inuu amaah ku baxo bishan January maadaama aanu haysanin boos uu ka ciyaaro.
Muddadii uu joogay Old Trafford ayuu Donny van de Beek ku jiray kaydka iyo waqtiyo badan oo aan liiska kooxdaba lagu soo darin.
Tababarihii hore ee shaqada laga caydhiyey ee Ole Gunnar Solskjaer oo saluugay qaab-ciyaareedka laacibkan ayaan xataa siinin fursad uu kooxda kula qabsado, hase yeeshee Rangnick oo markii uu xilka qabtay bishii November u muuqanayey inuu laacibkan beddeli doono xaaladdii uu ku jiray ayaa isaguna ka doorbiday ciyaartoyda kale.
Sida uu xaqiijiyey Fabrizio Romano, Donny van de Beek ayaa hadda saxeexay heshiis amaah ah oo uu ugu wareegayo kooxda horyaalka Premier League ee Everton, waxaana heshiiska si buuxda ay labada kooxoodba u shaacin doonaan ka hor inta aanu xidhmin suuqa oo caawa ku eg.
Van de Beek ayaa waxa kale oo Everton ay maanta ku wada biirayaan laacibka reer England ee Dele Alli oo isaguna amaah ku tegaya Goodison Park.
Everton ayaa maanta waxay tababare u magacowday Frank Lampard oo heshiis laba sannadood iyo badh ah u saxeexay, isaga oo beddelay Rafa Benitiez oo toddobaadkii hore shaqada laga caydhiyey.